हावा ऊर्जा को लाभहरु: विशेषताहरु, उपयोग र नुकसान | हरियो नवीकरणीय
हावा ऊर्जा को लाभहरु
जर्मन पोर्टिलो | | वायु शक्ति
पवन ऊर्जा उर्जा मोडेल, सफा र अधिक दिगो परिवर्तन गर्न ऊर्जा उत्पादनको मुख्य स्रोत बन्न गएको छ। सुधारिएको टेक्नोलोजीले केही हावा फार्महरूलाई कोइला वा आणविक ऊर्जा प्लान्टहरूको रूपमा कम मूल्यमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्षम गर्दछ। यसमा कुनै श .्का छैन कि हामीले सामना गर्ने उर्जाको यसको फाइदा र बेफाइदाहरू छन्, तर भूतपूर्व जित्दा ठूलो जीत। र त्यहाँ धेरै छन् हावा ऊर्जा को लाभहरु।
तसर्थ, हामी यो लेख समर्पित गर्दैछौं वा हावाको उर्जाका मुख्य फाइदाहरू के हुन् बताउन यो ग्रहको उर्जाको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
1 के हो
3 हावा ऊर्जा को लाभहरु
3.1 यो एक अक्षय ऊर्जा हो र थोरै ठाउँ लिन्छ
3.2 यो प्रदूषण गर्दैन र कम लागत छ
4 वायु उर्जाको अधिक फाइदा र नुकसानहरू
4.1 हावा स्थिर छैन र ऊर्जा भण्डारण गरिएको छैन
4.2 परिदृश्य र जैव विविधता को प्रभाव
सबैको पहिलो कुरा थाहा पाउनु हो कि यस प्रकारको उर्जा के हो। हावाबाट उर्जा प्राप्त गर्ने उर्जा भनेको पवन ऊर्जा हो। यो एक किसिमको उर्जा हो जुन हावा प्रवाहको कार्यबाट उत्पादित हुन्छ। हामी यस उर्जालाई जेनरेटरको माध्यमबाट विद्युतीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्छौं। यो एक स्वच्छ, नवीकरणीय र प्रदूषण रहित उर्जा हो जसले जीवाश्म ईन्धनहरू द्वारा उत्पन्न ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ.
संसारमा वायु उर्जाको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका हो, यसपछि जर्मनी, चीन, भारत र स्पेन। ल्याटिन अमेरिकामा सबैभन्दा ठूलो उत्पादक ब्राजिल हो। स्पेनमा, पवन उर्जाले १२ मिलियन घरहरूको बराबर बिजुली प्रदान गर्दछ, जसले देशको मागको १%% प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसको मतलब देशको बिजुली कम्पनीहरूले प्रदान गरेको प्राय: हरित उर्जा वायु फार्मबाट आउँछ।
हावा टर्बाइनको ब्लेडहरूको आवागमनलाई विद्युतीय ऊर्जामा रूपान्तरण गरेर वायु ऊर्जा प्राप्त गरिन्छ। एक पवन टर्बाइन एक जेनेरेटर हो जो पवन टर्बाइन द्वारा संचालित हुन्छ र यसको पूर्ववर्ती पवनचक्की थियो। हावा टर्बाइन एक टावरको हुन्छ; स्थिति प्रणाली टावरको अन्तमा यसको माथिल्लो छेउमा अवस्थित छ। एउटा क्याबिनेट टावरको फेदमा विद्युतीय नेटवर्कमा जडान गर्न प्रयोग गरिन्छ; ह्या hanging्गी टोकरी एक फ्रेम हो जुन मिलको मेकानिकल भागहरू राख्छ र ब्लेडहरूको लागि आधारको रूपमा काम गर्दछ; शाफ्ट र रोटर ब्लेडको अगाडि संचालित छन्; त्यहाँ ब्रेक, गुणक, जेनेरेटर र नेसेलेमा विद्युतीय समायोजन प्रणाली छन्।
ब्लेड रोटरमा जोडिएको हुन्छ जुन शाफ्टमा जोडिएको हुन्छ (चुम्बकीय ध्रुवमा अवस्थित), जसले जेनेरेटरलाई घुमाउने ऊर्जा पठाउँदछ। जेनरेटरले भोल्टेज उत्पन्न गर्न म्याग्नेट प्रयोग गर्दछ, यस प्रकार विद्युत उत्पादन गर्दछ।
हावा फार्मले आफ्नो सबस्टेशन सेन्टरबाट उत्पादित बिजुलीलाई केबुलहरू मार्फत वितरण सबस्टेशनमा पुर्‍याउँछ, र उत्पन्न ऊर्जा वितरण सबस्टेशनमा आपूर्ति गरिन्छ र अन्त प्रयोगकर्तालाई दिइन्छ।
हावा ऊर्जाका धेरै फाइदाहरू छन् कि हामीले तिनीहरूलाई विस्तृत रूपमा जानको लागि भाग गर्नुपर्नेछ।
यो एक अक्षय ऊर्जा हो र थोरै ठाउँ लिन्छ
यो नवीकरणीय उर्जा स्रोत हो। हावा एक धनी र अपारदर्शी स्रोत हो, जसको मतलब यो हो कि तपाईं जहिले पनि मूल ऊर्जा स्रोतमा निर्भर रहन सक्नुहुन्छ, यसको मतलब यो हो कुनै म्याद सकिने मिति छैन। साथै, यसलाई विश्वभरि धेरै स्थानहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उही मात्राको बिजुली उत्पादन र भण्डार गर्न, हावा फार्महरूलाई फोटोभोल्टाइकहरू भन्दा कम भूमि चाहिन्छ। यो उल्टाउन पनि मिल्छ, जसको मतलब पार्कले कब्जा गरेको क्षेत्र सजिलैसँग पहिलेको अवस्थित क्षेत्रको नवीकरण गर्न सकिन्छ।
यो प्रदूषण गर्दैन र कम लागत छ
सौर ऊर्जा पछि पवन उर्जा एक सफा ऊर्जा स्रोत मध्ये एक हो। यसको कारण यो हो कि यो उत्पादनको समयमा दहन प्रक्रिया होइन। त्यसकारण यसले विषालु ग्याँस वा ठोस फोहोर उत्पादन गर्दैन। हावा टर्वाइनको उर्जा क्षमता १,००० किलोग्राम तेलको उर्जा क्षमतासँग मिल्दोजुल्दो छ।
यसबाहेक, टर्बाइन आफैंमा धेरै लामो जीवन चक्र छ डिस्पोजलको लागि हटाउनु अघि। हावा टर्बाइन र टर्बाइन मर्मत लागत अपेक्षाकृत कम छ। उच्च हावा भएका क्षेत्रहरूमा, प्रति किलोवाट उत्पादन लागत धेरै कम छ। केहि अवस्थाहरूमा, उत्पादन लागतहरू कोइला वा आणविक शक्ति जस्ता हुन्छन्।
वायु उर्जाको अधिक फाइदा र नुकसानहरू
यस प्रकारको उर्जा अन्य आर्थिक गतिविधिहरूसँग उपयुक्त छ। यी पक्षमा एक ठूलो मुद्दा। उदाहरण को लागी, कृषि र पशुधन गतिविधिहरु हावा फार्मको गतिविधि संग मिल्छ। यसको मतलब यो हो कि यसले स्थानीय अर्थव्यवस्था मा नकरात्मक प्रभाव पार्दैन, र सुविधाले आफ्नो परम्परागत गतिविधिहरूको विकासमा अवरोध बिना धनको नयाँ स्रोतहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ.
अर्कोतर्फ, तपाईंले आशा गर्नुभए जस्तो, सबै हावाको ऊर्जाका लाभहरू होइनन्, तर त्यहाँ केही बेफाइदाहरू पनि छन्। तिनीहरू प्रत्येक विश्लेषण गरौं:
हावा स्थिर छैन र ऊर्जा भण्डारण गरिएको छैन
वायु शक्ति अपेक्षाकृत अप्रत्याशित हुन्छ, त्यसैले उत्पादन पूर्वानुमान सधैं पूरा हुँदैन, विशेष गरी साना अस्थायी उपकरणहरूमा। जोखिम कम गर्न, त्यस्ता सुविधाहरूमा लगानी सधैं दीर्घकालीन हुन्छ, त्यसैले यसको फिर्ताको गणना सुरक्षित हुन्छ। यस कमीलाई जानकारीको एक टुक्रासँग बुझ्न सकिन्छ: हावा टर्बाइनहरू तिनीहरू केवल १० देखि km० किमी / घन्टाको घाँस अन्तर्गत सामान्य रूपमा कार्य गर्न सक्दछन्। कम गतिमा, ऊर्जा लाभदायक हुँदैन, जबकि उच्च गतिमा, यसले संरचनामा शारीरिक जोखिम प्रतिनिधित्व गर्दछ।
यो उर्जा हो जुन भण्डार गर्न सकिदैन, तर यो उत्पादन हुने बित्तिकै उपभोग गर्नुपर्दछ। यसको मतलब यो हो कि यसले अन्य प्रकारको उर्जा प्रयोग गर्न पूर्ण विकल्प प्रदान गर्न सक्दैन।
परिदृश्य र जैव विविधता को प्रभाव
ठूलो मापन हावा फार्महरु को एक मजबूत परिदृश्य प्रभाव छ र एक ठूलो दूरी बाट देख्न सकिन्छ। टावर / टरबाइनको औसत उचाइ to० देखि meters० मिटरसम्म हुन्छ, र घुम्ने ब्लेडहरू अतिरिक्त meters० मिटर उठाइन्छ। ल्याण्डस्केपमा सौंदर्य प्रभावले कहिलेकाँही स्थानीय बासिन्दाहरूलाई असुविधा उत्पन्न गर्दछ।
हावा फार्महरूले चराको जीवनमा नकरात्मक असर गर्न सक्दछ, विशेष गरी र्याप्टरहरू जुन राती सक्रिय छन्। चरामा प्रभाव तथ्यको कारणले हो घुम्ने ब्लेडहरू km० किमी / घन्टा सम्मको गतिमा सर्न सक्छ। चराहरूले नेत्रहीन रूपमा यस वेगमा प्याडलहरू चिन्न सक्दैनन् र उनीहरूसँग घातक रूपमा टक्राउँदछन्।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीका साथ तपाईं हावा ऊर्जाका फाइदाहरू र यसका केही कमजोरीहरूको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » नवीकरणीय ऊर्जा » वायु शक्ति » हावा ऊर्जा को लाभहरु
कहिले तेल समाप्त हुन्छ